पुरुस नपुंसकता के हो ? के कारणले हुन्छ ? जानी राखौँ – aajnepal
HomeHealthपुरुस नपुंसकता के हो ? के कारणले हुन्छ ? जानी राखौँ
January 31, 2019 aajnepal Health 0
हुन त हाम्रो समाजमा बच्चा भएन भने सधै जसो महिलमाहरुलाई नै दाष दिने गरिन्छ र गर्ने चलन छ । तर सधै महिलाकै कारण वा महिलाको बाँझोपन नै सधै दोष हुदैन त्यसमा पुरुषको पनि उत्तिकै महत्व र हात रहन्छ । किन की पुरुषको नपुंसकताका कारण पनि सन्तान नहुन सक्छ । तर समस्या के छ भने पुरुषमा बाँझोपन या नपुंसकताको लक्षण पत्ता लगाउन ज्यादैं गा¥हो हुन्छ । सामान्यतस् शरीरमा हर्मोनको गडबडी या कमीका कारण नपुसंकता निम्तन सक्छ । हर्मोनको परिवर्तनको कारण पनि पुरुषमा यस्तो समस्या हुन सक्छ । यसकारण नपुसंकताको कारण पत्ता लगाउन गा¥हो हुन्छ ।
सामान्यतया पुरुषमा सम्भोगको समयमा सही तरिकारले यौन क्रिया गर्न नसक्नु या शिघ्रपतन हुनु नपुसंकताको लक्षण हुन सक्छ । खास गरी नपुसंकताको संबन्ध सिधा रुपमा ज्ञानेन्द्रियसंग हुन्छ, यस्तो अवस्थामा पुरुषहरू यसबारेमा जागरुक हुँदैंनन् भने कैयौंपटक संकोचका कारण डाक्टरसंग परामर्श लिँदैंनन्, जसबाट रोग बढ्ने संभावना हुन्छ । नपुंसक व्यक्ति आफ्नो महिलासाथीसंग कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन ।
मुख्यतया नपुंसकताको लक्षणहरु यी हुन् – जो पुरुष सम्भोगका दौरान सही तरिकाले यौन क्रिया गर्न सक्दैंनन् या शिघ्रपतन हुन्छ, यो नपुसंकताको लक्षण हुन सक्छ । – नपुसंकता भएका पुरुषको लिंगमा कठोरता आउँदैंन, आएपनि लिंग चाँडै लुलो हुन्छ । सम्भोगका दौरान अचानक लिंगका कठोरतामा कमी आउनु पनि यसको लक्षण हो । – नपुसंकताको सिधा संबन्ध ज्ञानेन्द्रियसंग हुन्छ । मानिसले संकोचबश या जागरुकताको अभावमा यसबारेमा केही थाहा पाएका हुदैंनन। । – नपुसंकता धेरै उमेर भएका व्यक्तिमा पाइन्छ, जसबाट महिलानजिक जान पनि उनीहरुलाई डर लाग्न सक्छ । बढ्दो उमेरसंगै यौन इच्छा पनि कम हुँदैं जान्छ । – जो पुरुष यौन क्रियामा रुची राख्दैन र जसमा उत्तेजना हुँदैंन, उ पूर्ण रुपमा नपुंसक हुन सक्छ । – नपुंसकताका कारण पुरुषको लिंग सामान्यभन्दा छोटो हुन्छ, जसबाट पुरुष सही तरिकाले सम्भोग गर्न असमर्थ हुन्छ । – नपुंसकता पीडित व्यक्तिमा आत्मविश्वासको कमी हुन्छ यस्ता मानिस अक्सर भीडमा हड्बडाउछन्, महिलासंग कुरा गर्न पनि मन पराउदैंनन् । – नपुसंक व्यक्तिमा रोगप्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ, जसका कारण मानिस पटकपटक बिरामी परिररहन्छ । – बाँझोपनाका कारण प्रजनन अंग कमजोर हुन्छ । – फास्टफुडको बढी प्रयोग र खानपानमा पोषक तत्वको कमी पनि यसको प्रमुख कारण हो ।
कलेज गएकी छोरी काठमाण्डौंबाट बेपत्ता सबैले सेयर गरी खोज्न सहयोग गरौँ